Iwo gumi akanakisa marekodhi eako terminal | Linux Vakapindwa muropa
Tichakuratidza iwe iyo 10 yakakosha screencasting inoratidza, sezvo ivo vakatarisana nekoni. Zvekuti ichi chishandiso chebasa rine simba hachiende pasina kucherechedzwa. Iti usati watanga kunyora gumi akange asarudzwa, kuti rudzi urwu rwe software rwakatanga kushandiswa pakati pemakumi mapfumbamwe, nemapurogiramu akawandisa ekuratidzira ayo akatanga kurova pamusika kuti anyore mamiriro akajeka. Nekudaro, vazhinji havazive kana kusaziva kuti iripowo kune iyo koni, uye kunyangwe izvi zvichikwanisika kuitwa kubva pakuongorora maapplication enzvimbo inoonekera kana tikabata zvinoitika pachiratidziro, hatidi izvozvo ...
Zvirongwa zvinowanzo shandiswa nechinangwa chekudzidzisa kudzidzisa kuti mamwe mabasa anoitwa sei, kunyangwe achigona kushandiswa kune mamwe marudzi emapurojekiti kana kungogovana ruzivo nenzira yakajeka uye inonzwisisika. Pamusoro pezvo, kuve kwekupedzisira, izvi zvirongwa zvinoshandisa mashoma zviwanikwa (zvichienzaniswa ne graphic screencasting programme), zvakanaka kana iwe uine komputa ine simba shoma kana kana iwe uchida kugovana pamusoro pemapanetwork ane mashoma bandwidth. Zvakanaka, iro runyorwa rwegumi yakanakisa yakavhurwa sosi uye yemahara ndeiyi:
ttystudio: rekodhi kuti ipere muGIF.
acinema: rekodhi zvikamu zvekupedzisira zvekugovana.
Shelr: Plain mavara echidzitiro akarekodwa.
Ratidza nguva: nyora chiitiko ichi kuti ugone kuchigovana.
TermRecord: rekodhi terminal chikamu neHTML kuburitsa.
ttyrec: rekodha iyo terminal, pamwe neyekushandisa yekutamba chishandiso.
IPBT: zvimwe zvekubatwa kwekupedzisira.
tty2gif: Seizvo zita rayo rinoratidzira, inorekodha mumabhainari uye mafomati ezvipo.
termrec: seti yemidziyo yekurekodha uye kudzosera zvikamu zveTTY.
chinyorwa: Nezita iri rakakodzera, nderimwe remhando dzechinyakare pane ese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Iwo gumi akanyanya marekodhi eako terminal
ndine moc mutambi wekupedzisira
isai seizvi nekutaipa mune iyo terminal
sudo apt-tora kuisa moc
wobva waisa password yako yemushandisi
chimwe chinhu chinodakadza kana iwe ukanyora makiyi mune iyo terminal ivo havaonekwe asi ivo vachiri kushanda ini ndinofunga ndeyekuchengetedza zvakadaro
Kuita kuti chirongwa cheMDC chishande, nyora mutaraini.
iwe unopa kupinda uye kana iwe ukaivhura, tsvaga iyo folda kwaunenge uine mimhanzi uye uvaridze
Iyi ndiyo mitambo yemitambo ine Ubuntu yakaiswa